Uluhlu lweendawo ezivulwa kwakhona eBangkok ngenxa yeCOVID
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Uluhlu lweendawo ezivulwa kwakhona eBangkok ngenxa yeCOVID
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
Uluhlu lwento evula kwakhona eBangkok
Iindidi ezininzi zeendawo kunye namashishini eBangkok avumelekile ukuba aqhubeke kwakhona nokusebenza ukuqala namhlanje, nge-22 kaJuni, ngo-2021, phantsi koMyalelo wokuValwa okwethutyana kweZakhiwo (No. 33).
Isaziso sikaRhulumente waseThai esandula ukwenziwa
Ulawulo lweMetropolitan yaseBangkok (i-BMA) lubhengeze i-Odolo yamva nje yokuValwa okwethutyana kweZakhiwo (No. 33).
Oku kulandelayo emva kokubhengezwa kukaRhulumente waseRoyal Thai wokuqhubela phambili amanyathelo e-COVID-19 kwilizwe liphela.
Funda kuluhlu olubanzi lwezinto ezivulayo kwaye zilungele ishishini.
Fumanisa ukuba yintoni kuluhlu ukusuka kumachibi okudada esidlangalaleni ukuya kwiipaki zikawonke-wonke, iimyuziyam ukuya kwiiringi zokulwa, ii-bowling alleys kwimidyarho yamahashe, amaziko okwehla ubunzima bomzimba ukuya kwii-salon zobuhle, nokunye okuninzi.
Amachibi okudada oluntu okanye amanye amashishini afanayo.
Zonke iintlobo zamachibi okanye amachibi ezemidlalo okanye ezemisebenzi yolwandle, ezinje nge-jet skiing, i-kitesurfing, kunye nokuhamba ngesikhephe sebhanana kuvunyelwe ukuba kuvulwe inani labathengi kude kube ziiyure ezingama-2100. kwaye bavunyelwe ukubamba imicimbi yezemidlalo ngaphandle kwabaphulaphuli.
Amaziko okufunda, amaziko enzululwazi emfundo, iipaki zesayensi, amaziko esayensi kunye nenkcubeko, kunye neegalari.
Amathala eencwadi oluntu, amathala eencwadi oluntu, amathala eencwadi abucala kunye nezindlu zeencwadi.
Iivenkile ezithengisa ukutya okanye utywala - ukutya ukutya kunye nesiselo kwezi ndawo zivunyelweyo kude kube ziiyure ezingama-2300. Ezi ndawo ziya kulinciphisa inani labantu abasebenzisa ukutya neziselo kwiipesenti ezingama-50 ngenani lezihlalo eziqhelekileyo. Ukusetyenziswa kotywala neziselo ezinxilisayo kwezi ndawo bekungavumelekanga.
Zonke iintlobo zeendawo zemidlalo zangaphakathi nangomoya ezingena umoya zivumelekile ukuphinda zivulwe kude kube ziiyure ezingama-2100 kwaye zivunyelwe ukubamba imicimbi yezemidlalo ngaphandle kwabaphulaphuli.
Iivenkile ezilula zinokuqhubeka nokusebenza kunye nexesha lazo eliqhelekileyo.
Nayiphi na imisebenzi enokusasazeka kwezifo, ezinje ngeentlanganiso, iisemina, iindibano, ukuhanjiswa kokutya okanye izinto ezinxulumene noko, amaqela, inkampu, ifilimu okanye inkqubo yeTV, imisebenzi yezenkolo, ukuziqhelanisa neDharma, kunye neentlanganiso nezalamane eziphezulu zinokucwangciswa kodwa inani Abazimeleyo kufuneka bangadluli kubantu abangama-50.
Owona myalelo wakutshanje we-BMA onguNombolo 32 uvumele ezi ndidi zintlanu zilandelayo ukuba ziphinde zivulwe e Bangkok.